Tirada dadka ku dhintay weerarada ka dhacay tuulooyinka Niger ayaa sii kordheysa - teles relay
Raiisel wasaaraha Niger wuxuu sheegay in 100 qof ay hada ku dhinteen weeraradii sabtidii oo ay tuhunsanyihiin mujaahidiintu inay ka geysteen laba tuulo.
Brigi Rafini wuxuu sheegay in 70 qof lagu dilay tuulada Tchombangou halka 30 kalena lagu dilay Zaroumdareye - oo labaduba u dhow xadka u dhexeeya Niger iyo Mali.
Waxay ahayd mid ka mid ah maalmihii ugu dhimashada badnaa ee xusuusta noola iyada oo Niger ay la daalaa dhaceyso rabshado qowmiyadeed iyo xagjirnimada Islaamiyiinta.
Ma jirto koox sheegatay inay weerarada qaadeen.
Sida uu sheegayo duqa deegaanka Almou Hassane, mas'uuliyiintu waxay ku safreen "boqol mootooyin", sida ay qortay wakaalada wararka ee AFP.
Waxay u kala qaybsameen laba qaybood isla markaana waxay fuliyeen weeraradii isku mar.
Wasiirki hore Issoufou Issaka ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP in mujaahidiintu ay weerarada bilaabeen kadib markii dadka tuulada ay dileen labo xubnood oo katirsan kooxdooda, walow aan si rasmi ah loo xaqiijin.
Duqa magaalada Hassane wuxuu sheegay in 75 qof oo kale oo tuulo ah ay ku dhaawacmeen howsha iyadoo qaarna loo daad gureeyay si loogu daweeyo Ouallam iyo caasimada Niamey.
Raiisel wasaare Rafini Axadii ayuu booqday labada tuulo.
"Xaaladdan waa mid laga naxo… laakiin baaritaanno ayaa lagu sameyn doonaa si dambigan uusan u noqonin mid ciqaab ah," ayuu u sheegay wariyeyaasha.
Gobolka Tillabéri ee Niger wuxuu ku yaalaa waxa loogu yeero sedexda xuduud ee udhaxeysa Niger, Mali iyo Burkina Faso, oo sanado badan ay ka dhacayeen weeraro jihaad doon ah.
HalyeeygaRaiisel wasaaraha Niger Brigi Rafini Axadii ayuu booqday labada tuulo
Bishii la soo dhaafay, toddobo askari oo reer Niger ah ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo ka dhacay gobolka.
Degaanada Niger ayaa sidoo kale wajahaya weeraro isdaba joog ah oo kaga imanaya jihaadistayaasha deriska la ah Nigeria, halkaas oo ay dowladdu ka wado kacdoon ay wadaan Boko Haram.
Iyada oo qayb ka ah dadaallada lagu doonayo in lagu joojiyo rabshadaha, Faransiiska ayaa hoggaaminaya isbahaysi ka socda Galbeedka Afrika iyo xulafada Yurub oo ka dhan ah mintidiinta Islaamiyiinta ah ee ku sugan gobolka Saaxil.
Xoogaga isbahaysigu waxay noqdeen bartilmaameedyo waxaana usbuucii la soo dhaafay shan askari oo Faransiis ah lagu diley laba dhacdo oo kala duwan oo ka dhacday Mali.
Weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay Tillabéri ayaa sidoo kale ku soo beegmay iyadoo ay socdaan doorashooyinka qaran ee ka socda Niger, iyadoo Madaxweyne Mahamadou Issoufou uu is casilay ka dib laba xilli oo shan sano ah.
Saraakiisha doorashada ayaa Sabtidii ku dhawaaqay natiijooyin kumeelgaar ah, oo muujinaya inuu hogaaminayo Mohamed Bazoum - wasiir hore iyo xubin ka tirsan xisbiga talada haya ee Niger.
Wareega labaad ee codbixinta ayaa la filayaa inay dhacdo 21ka Febraayo, marka codbixinta ay ansaxisay maxkamada dastuurka ee dalka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii ugu horreysay: https://www.bbc.com/news/world-africa-55525677
Boqorada wax iibsashada: muuqaalkee ayay qaadatay Carine Galli?
Ka saar qasab Windows 10 Cusbooneysiin - Talooyin
Kristen Stewart Snaps Stella Maxwell oo ku jirta Sawir Khatar Leh